‘Ndofira tsvina yevana here?’ | Kwayedza
‘Ndofira tsvina yevana here?’
04 May, 2018 - 00:05	 2018-05-03T16:53:40+00:00 2018-05-04T00:00:54+00:00 0 Views
MUKADZI wemuHarare anoti haasisina rugare nemuvakidzani wake uyo ave kufamba nebanga achiti anoda kumubaya naro zvichitevera kunetsana kwavari kuita nenyaya yevana vake vane tsika yekuitira tsvina mumunda une zvirimwa zvake. Moleen Parakinyu akataura mashoko aya mudare reHarare Civil Court apo akamhan’arira Ruvimbo Mapfumo.
“Vakuru vedare, ndauya kuno ndichitsvagawo kugadziriswa nemuvakidzani wangu kuti pave nerunyararo pakati pedu. Nyaya iri kunetsa ndeyekuti ndakawirirana naye kuti tirime munda mumwe chete tose asi dambudziko rakauya mbesa dzatokura. Vana vake vava kuitira tsvina mumunda une mbeu dzatakarima tose,” anodaro Parakinyu. Parakinyu anoti Mapfumo ava kumutuka zvinonyadzisira uye kumuvinga nebanga pamba pake achivimbisa kumuuraya nenyaya yetsvina iri kuitirwa mumunda nevana vake.
“Handizivi kuti ingave mhosva yekuburitsirana mapanga here iyoyo, yekuti munhu atsiure vana vake kuti vasaitire tsvina mumunda. Ndanzwa nekutukwa pane veruzhinji nezvimwe zvinhu zvisingaite pane vanhu.
“Ini handigoni zvekutukana naye kana kufambawo nerangu banga, asi ndaona kuti zviri nani kuuya kuno kudare ribatsire kuchengetedza runyararo pakati pangu naye. Ndava kugara ndichitya nekuti ava kufamba akaisa banga muhembe, handizivi kuti anozofungei tikasangana pasina veruzhinji,” anodaro.
Mapfumo haana kuenda kudare kuti anopawo divi rake.
Mutongi Larzin Ncube akapa Parakinyu gwaro rerunyararo.